युवराज खतिवडाले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि कुलमानले निकाले यस्तो कडा बिज्ञप्ति, कसलाई के भने ? — Imandarmedia.com
युवराज खतिवडाले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि कुलमानले निकाले यस्तो कडा बिज्ञप्ति, कसलाई के भने ?
काठमाडाैं । केहि दिनअघि एउटा समाचार अचानक भाइरल बन्यो । उक्त समाचार थियो कुलमान कुलामन लाई पुन: नेपाल बिद्धुत प्राधिकरणमा दोहोर्याईएको । केहि मूलधारका मिडियाहरुले समेत यो समाचार सम्प्रेसण गरेपछि कलाकारदेखि राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्मले घिसिङको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा राखेर बधाई दिए ।
क–कसले गर्दैछ उनलाई हटाउने चलखेल ?